Ubugcisa be pop kunye noAndy Warhol: izinto ongazaziyo malunga nentshukumo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
"Ubugcisa be pop buye wonke umntu" ngu sobermusings unelayisensi phantsi kweCC BY 2.0
Ngaba unomdla kwinkcubeko kunye nobugcisa be pop? Ngaba uyafuna ukwazi imvelaphi yayo? Awunakuphulukana nale posi!
Imibala eqaqambileyo nolutsha, iihlaya, intengiso kunye nezinto zemihla ngemihla ... zisekhona namhlanje kubugcisa. Leyo yaziwa ngokuba yiPop-Art yayingumbutho wobugcisa owazalwa phakathi kwiminyaka yama-50s e-United Kingdom, eyathi kungekudala yathuthela eUnited States (apho yafikelela encotsheni yayo) ebutsheni beminyaka yee-60.
1 Imvelaphi yePop-Art: Abstract Expressionism kunye noJackson Pollock
2 Ukunyuka kwePop-Art: Imvukelo ngokuchasene neAstract Expressionism
3 Abanye amagcisa oMbutho wePop-Art: uLichtenstein noWesselmann
Imvelaphi yePop-Art: Abstract Expressionism kunye noJackson Pollock
Kwiintsuku zayo zokuqala, iqela lamagcisa aselula aseBritane aqala inkqubo yokulungiswa kweplastiki Ukuphendula kwi-Abstract Expressionism yangaphambili. Le ntshukumo, yaqala e-United States nge-40, yabonakaliswa yimivumbo enobundlobongela eyenziwe ngemibala embalwa kwaye ingekhoyo ebonisa idrama yeemvakalelo zelo xesha. Ukongeza, bebehlala beyifomathi enkulu, belindele ukuboniswa kwiigalari, ukuze ithengiswe ngeemali ezinkulu kakhulu. Kwaye, ukuqokelela ubugcisa kwakufana nenqanaba eliphezulu lentlalontle.
Phakathi kwababonakalisi Uqaqambisa umzobi uJackson Pollock (1912 - 1956) nobuchule bakhe boku ukutsiba, apho ipeyinti ivumelekile ukuba ithontsize kwi-canvas okanye kwi-splatter nayo.
«UMOMA Pollock» yiCKH inelayisensi phantsi kweCC BY-ND 2.0
Bahlala kwihlabathi elibawayo lixakeke ludumo, apho umbono wobugcisa kwindawo yokuqonda, ngentsingiselo yomsebenzi, ufumene ukubaluleka okukhethekileyo.
Ukunyuka kwePop-Art: Imvukelo ngokuchasene neAstract Expressionism
Phakathi kwamagcisa adiniweyo kukuziqhelanisa nobugcisa obugqithisileyo kunye nesiphumo sokwahlukaniswa noluntu, umbutho wePop - Art wazalwa. Ukusetyenziswa kwamanani alula nalula, agcwele umbala, onwabile nolutsha. Ubugcisa obudumileyo, obufikeleleka ebantwini.
Ukumelwa kwezinto ezilula, zemihla ngemihla kuyabonakala, kubonisiwe njengeemveliso zabathengi, ngokungathi zizentengiso. Ziimveliso eziveliswe ngobuninzi, ngaphandle kokuthobela, ekuphenduleni ngendlela engacacanga kuluntu oluphakamileyo kunye nabathengi bexesha. Oku kubonakala kubanda kunye nokulula kwenzeka ngokuchaseneyo nentsingiselo enzulu eyanikwa imisebenzi ye-Abstract Expressionists.
Ukuba kukho umntu ophambili kule ntshukumo kwaye imisebenzi yakhe isefashoni nanamhlanje, ngokuqinisekileyo nguAndy Warhol. (Ngo-1928-1987). Bold kunye ne-cheeky, uWarhol wasebenzisa iisimboli zenkcubeko yaseMelika kwimizobo yakhe, imifanekiso evelisa umtsalane kubo: ibhotile yeCoca-Cola, iinkonkxa zesuphu zikaCampbell kunye noMarilyn Monroe ngokwakhe.
«IMyuziyam yoBugcisa baNgoku (MoMA)» yi-wyliepoon inelayisensi phantsi kweCC BY-NC-ND 2.0
Ngesinye isihlandlo wathi:
Eyona nto intle ngeli lizwe kukuba iUnited States iqale isithethe apho abathengi abazizityebi bathenga izinto ezifanayo njengezona zihlwempuzekileyo. Ungabukela umabonwakude, ubona intengiso yeCoca-Cola kwaye uyazi ukuba uMongameli usela iCoca-Cola, uLiz Taylor usela iCoca-Cola kwaye ucinga ukuba nawe ungasela iCoca-Cola. Imigca ilayini, kwaye akukho mali ehlabathini enokukwenza ukuba ufumane umgca ongcono kunalowo usela umngqibi ekoneni. Yonke imigca iyafana kwaye yonke imigca ilungile. U-Liz Taylor uyayazi, uMongameli uyayazi, umngqibi uyayazi, kwaye uyazi.
Abanye amagcisa oMbutho wePop-Art: uLichtenstein noWesselmann
Abanye abazobi bexesha ababesebenzisa imifanekiso ebandayo kunye nengqiqo ngokuchasene nokubonakaliswa okukhoyo, yayinguLichtenstein noWesselmann.
URoy Lichtenstein (1923-1967) waziwa ngemigca emikhulu yokuhlekisa ngokubanzi kusetyenziswa amanani avela kwiintengiso. Ukusetyenziswa kwabo kwe-onomatopoeia kuzo kukwahluke kakhulu. Wonke umntu oyibonayo imisebenzi yakhe namhlanje uya kuyazi ngokuqinisekileyo!
Umfanekiso ngu-shogunangel unelayisensi phantsi kwe-CC BY-NC-ND 2.0
UTom Wesselmann (1931 - 2004), uyathandwa kakhulu ngabafazi bakhe ababhinqileyo, isidlele kwaye sihlekisa. Kwiifom ezichaziweyo kodwa ezinemiqobo, umzimba wabasetyhini uboniswa ngaphandle kokukhetha, ngendlela elula nengqele, ngokungathi ngumfanekiso wentengiso wexesha.
Ngokuqinisekileyo uyazi eminye yale misebenzi, njengoko isefashoni nanamhlanje!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ubugcisa be pop kunye noAndy Warhol: izinto ongazaziyo malunga nentshukumo yokuqala yobugcisa